इन्टरनेटको 'स्पिड चेक' अब गुगलमै
Friday, 1 Sep, 2017 5:07 PM
एजेन्सी- आफूले इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट लिएको इन्टरनेटको गति कति छ ? आफूले तिरेको मूल्य अनुसार आइएसपीले प्रतिबद्धता गरेको स्पिड दिएको छ वा छैन जाच्न के गर्नुहुन्छ ? सामान्यतः स्पिडटेस्ट डटनेट वा त्यस्तै अन्य साइटहरु पहिलो रोजाइको उत्तर हुन सक्छन् ।
पछिल्लो समय सर्चइन्जिन जाइन्ट गुगलले प्रयोगकर्तालाई आफूले प्रयोग गर्दै गरेको इन्टरनेटको स्पिड पत्ता लगाउन सजिलो बनाइ दिएको छ । प्रयोगकर्ताले गुगलको सर्च बक्समा गएर अङ्ग्रेजीमा 'इन्टरनेट स्पिड टेस्ट' लेखेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्च नतिजामा प्रयोगकर्ताले ओक्लाको स्पिड टेस्ट र अन्य सर्च नतिजा देख्न सक्ने छन् । सर्च नतिजामध्ये स्पिडटेस्ट डट गुगलफाइबर डट नेटमा क्लिक गर्नुहोस् । त्यसपछि देखिने स्क्रिनमा तल देखिएको फोटोमा झैँ प्ले बटन क्लिक गर्नुहोस् ।
अथवा सिधै स्पिडटेस्ट डट गुगलफाइबर डटनेटमा गएर पनि इन्टरनेटको स्पिड टेस्ट गर्न सकिने छ ।
प्ले बटनमा क्लिक गरेपश्चात स्पिड टेस्ट ले काम गर्न सुरु गर्ने छ । केही बेरमा प्रयोगकर्ताको इन्टरनेट स्पिड गुगलले लिस्ट गरिदिने छ ।
अब गर्ने होइन त गुगलको इन्टरनेट स्पिड टेस्टको प्रयोग ?